Xogta Iyo Xaqiiqada Xisbiga UDUB, Qaybta Koowaad | Somaliland.Org
June 24, 2008	Marka hore waxaan salaan u gudbinayaa bahda saxaafada Somaliland ee tabisa wararka iyo afkaarta shacabka.Waxaan sidoo kale cambaarayn u tabinayaa inta gabtay xilkoodii saxafinimo ee iyagoo ku shaqeeya cashuurtii ummada laga qaaday aan haddana tabin wararkii shacabka mucaarid iyo muxaafidba, ee muxaafidka uun u ololaysa.
Haddaba waxaan jeclaa in aan diyaariyo dhawr qormo oo taxane ah oo ka hadlaya xisbigan hadda haya talada Somaliland ee UDUB.
Xisbiga UDUB, waxa la sheegaa in loo soo gaabiyay xarfo ah “Ururka Dimuqraadiga Ummada Bahawday”, laakiin taas shaki wayn ayaa ku jira, waxaana su’aal wayni ay saaran tahay Dimuqraadiyaas uu xisbigu sheeganayo, waxaana taas u daliil ah, in aanu xisbiga UDUB, dhexdiisa ka jirin haba yaraatee wax dimuqraadiyad ahi, hogaaminta xisbiguna waa mid aan loo tartami Karin oo cid gaar ahi ay gacanta ku hayso.
Taas waxa tusaale ugu filan markii uu Cabdi Aw Daahir oo ahaa Xoghayaha guud ee xisbiga Udub uu isku dayay in uu noqdo musharax u taagan jagada gudoomiyaha xisbigaas, waxa gabi ahaanba laga qaaday xilkiisii Xoghayenimo, waxa laga saaray golihii dhexe ee ururka, sidoo kale waxa gabi ahaanba laga xayuubiyay xubinnimadiisii xisbiga, iyada oo booskiisii la keenay Maxamed Ismaaciil Bullaale, oo ogsoon sida uu jagada ku helay,oo ah barobixin ku dhacday nin ay Gobo lama degmo ka soo wada jeedaan, islamarkaasna ah nin aan sinaba uga hor iman Hogaanka UDUB,sheegana in aan xisbigu u baahnayn shirweyne gabi ahaanba. Xisbiga UDUB, shirweynihiisa oo ay ahayd in ay qabsadaan 2006, ayaa la isku dayay in la qabto, waase la baajiyay, kadib markii ay soo baxeen in rag odayaal ah oo xisbiga ahi, ay doonayaan in ay u tartamaan jagada Gudoomiyeha xisbiga, iyada oo baajinta shirweynahana sabab looga dhigay, dalka ayay abaaro ka jiraan, waa se su’aale shirweyne gabigiisuba saddex cisho ahi muxuu dhibaato keenayaa ama uu abaaraha ku siyaadinayaa hadii la qabto?.
Xubnaha aqoonyahanada ah ee ku jira Xisbiga UDUB, ayaa iyaguna ah qaar aan awood u lahayn in ay u tartamaan hogaanka xisbiga, waayo waxa la yidhi “Ninkii qayrkii loo xiirayoow adna soo qoyso”, waxaanay ku waano qaateen isha Cali ka laalaada, ama waxa ay arkeen wixii qabsaday Cabdi Aw Daahir, markii uu damaaciyay Hogaaminta xisbiga ee uu muujiyay hankiisa siyaasadeed.
Sanadahana waxa jira warar hoose oo sheegaya in rag UDUB ka tirsani ay rabaan in ay u tartamaan hogaaminta xisbiga, inkasta oo aanay si cad daaha uga qaadin rabitaankooda, cabsi ay ka qabaan in daaqada laga saaro awgeed, ee bal waa la eegi insha Allah waxa ku dhaca raggaasi marka ay isa soo sharaxaan iyo in la mariyo wadadii Cabdi Aw Daahir oo kale.
UDUB waa meel ragga hanka leh lagu dhufaano, oo aan la hungurayn Karin xilalka qaar, waa meel kooto ugu xidhan dhawr nin oo aan sinaba loola tartami Karin, waa madal lagu habsoobo, oo lagu bahdilmo, dadka galana waxa lagu dirqiyaa in ay yeelaan wax aan u cuntami Karin.Waan eegi doonaa dadka gobanimada muujiyay ee doorbiday in ay UDUB ka baxaan intii ay ahaan lahaayeen qaar ku hoos jira gacanta maamul ku sheega UDUB. Qof kasta oo leh han siyaasadeed waxaan kula talin lahaa, in aanu galin xisbigaas, ama isbahaygisaas uu ninku iska leeyahay, ee aan cid kale marnaba ku hamiyi Karin hanashadiisa.
Akhristayaal qormadaas oo aan ku eegay digtaatooriyada xisbiga UDUB, intaas ayaan ku dhaafayaa, la soco qaybo kale oo xiiso badan oo ka hadlaya siyaasad(Daneysiga), dhaqaalaha (Musuq maasuqa), awoodqaybinta, maamul xumida xisbiga UDUB, iyo waliba in ragga UDUB hogaamiyaa ay u qalmaan xilkaas iyo in kale.